Dawlada Turkiga oo ku dhawaaqay baroordiiq sadex maalood ah – STAR FM SOMALIA
Dawlada Turkiga oo ku dhawaaqay baroordiiq sadex maalood ah
Ra’iisal Wasaaraha Turkiga, Ahmet Davutoğlu, ayaa wuxuu gelinkii dambe ee Sabtidii uu ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq ah, oo loo samaynayo dadkii ku dhintay labadii qarax ee ka dhacay Magaalada Ankara.
Ra’iisal Wasaaraha waxaa uu sheegay qaraxyadaasi inay ahaayen kuwo ismiidaamin ah, ka dib markii laamaha ammaanka Turkiga uu ka dhageystay warbixin ku saabsan qaraxyadaasi, oo lala beegsaday dad dhigaayay bannaanbax nabdoon, oo ay ku dalbanayen in Xukuumadda Ankara ay joojiso weerarada, ay ku hayso mintidiinta Kurdiyiinta.
Ra’iisal Wasaaraha, ayaa xaqiijiyay qaraxyadaasi inay ku dhimatay 86 ruux, halka 200 oo kalana ay ku dhaawacantay, wuxuuna qaraxyadaasi ku sheegay falal argagaxiso, isagoona si xoogan u cambaareeyay
Ahmet Davutoğlu oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Ankara, ayaa wuxuu shacabka Turkiga uu ugu baaqay in laga wada shaqeeyo adkaynta midnimada.
Sidoo kale waxa uu dadka reer Turki uu ugu yeeray in si wada jir ah halmeel looga soo wada jeesto, lalana dagaalamo argagaxisada, haddii ay weerar ku yihiin dalkooda.
Muuqaalo laga soo duubay sida ay qaraxyadaasi u dhaceen, ayaa waxaa qaraxyada ka dib, ka soo muuqday dadkii bannaanbaxa dhigaayay oo argagaxsan, dhawr jihana u kala cararaya.
Turkiga, ayaa waxa uu wajahaya weeraro kala duwan oo kaga imanaya mintidiinta Daacish iyo Kurdiyiinta, tan iyo markii uu qaaday tallaabooyin ka dhan ah kooxahaasi.
Diyaarad Helicopter ay leedahay dowladda Britain ayaa ku bur burtay saldhig NATO ku leedahay magaalada Kapul
wararkii ugu danbeeyey ee qaraxyadii ka dhacay dalka turkiga oo tiradii dhimasho iyo daawac sii koradhay